कहाँबाट प्राप्त हुन्छ प्रधानमन्त्री कोइरालालाई उर्जा ? : वेदराज पौडेल | Indigenous Knowledge
राजधानीको कोलाहल पूर्ण वातावरणबाट आरामका लागि अनौपचारिक रुपमा लुसुक्क विराटनगर आउने प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोईरालाको आगमन सवैका लागि चासोको विषय बन्ने गरेको छ। राजधानीबाट गृहनगर आएपछि हरेकपटक कोइरालाले मुलुकको राजनीतिमा ठुलै हलचल पैदा गर्ने अभिब्यक्ती दिने गरेका छन्। किन कोईराला विराटनगर पुगेपछि मात्रै कडा कुरा गर्छन्? कहिले गणतन्त्रको लागि राजाले आफैं बाटो खुलाएको कुरा त, कहिले राजा र युवराजले गद्धि त्याग्ने कुरा। के छ निवासमा त्यस्तो चिज जस्ले उनलाई राजनैतिक बृत्तमा तरंग ल्याउने अभिब्यक्ती दिन उत्प्रेरित गर्छ?
राजधानीमा रहने प्रधानमन्त्री प्रायः महिना दुई महिनामा गृहनगर आइपुग्छन्। पिताजी कृष्णप्रसादले करिब सय वर्षअघि बनाएको विराटनगर-९ स्थित घरमा आइपुग्दा गिरिजाप्रसाद जहिल्यै कडा कुरा गर्छन्। आखिर के पाउँछन् प्रधानमन्त्रीले आफ्नो घरमा? कस्तो होला प्रधानमन्त्रीको घर जस्ले उनलाई नयाँ कुरागर्न उत्साहित गरिरहन्छ। ८४ बर्षे उमेरमा पनि राष्ट्रलाई नयाँ दिशा दिन लागि परेका प्रधानमन्त्रीलाई घर आएपछि किन आफु तागतिलो छु भन्ने लाग्छ?इतिहासमा सवैभन्दा बढी शक्ति प्राप्त गर्ने प्रधानमन्त्री कोईरालाको निवास कस्तो होला? एकक्षण सोच्ने हो भने कल्पनामा ठुलो ‘दरवार’ झै महल, प्रवेश निषेध सहितको कडा सुरक्षा घेराको चित्र आउन सक्छ।
कोशी अंचल अस्पतालको पश्चिमपट्टी रहेको निवास सिरिस, अमला र आँपका रुखले छेलेर सडकबाट ठम्याउन सजिलो छैन। गाई, गोरु र भैंसीको गोठ रहेको उही पुरानो घरनै अहिलेको प्रधानमन्त्री निवास हो। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको रेखांङ्कन होस् अथवा मुलुकमा आईपरेका समस्या सुल्झाउने उपायको खोजी यी सवै ऐतिहासिक घट्नाक्रमको एकमात्र साक्षीपनि हो निवास। काँग्रेसका पहिलो र दोश्रो पुस्ताका अधिकांश नेताहरुको वासस्थान, राजनैतिक प्रशिक्षण तथा योजनाको थलो पनि यहि नै थियो।
बारीमा सिजन अनुसारको तरकारीहरु देख्न पाईन्छ। बुइगलमा खोर्सानीका सुकेका सील र लसुनका झुत्ता झुण्डीरहेका छन्। गोबरले लिपीएको आँगन। नजिकै सानो फुलवारी। एउटा मध्यम वर्गीय परिवारको सामान्य घरबाहेक यहाँ कुनै जादुइ दुनिया देखिदैन। तर प्रधानमन्त्रीलाई आत्मबल बढाउने साधन तिनै हुन्। आफुले गोडेको फुलवारी, आमाको पुरानो आलमारी, पिताजी र सान्दाजुले प्रयोग गर्ने सामान र आफुले पहिलो भाषण गर्न सिक्दाखेरीको पुरानो ठुलो ऐना। अनि आफ्नो बाल्य, युवा र प्रौढावस्था राजनीति र गैरराजनीतिक क्षेत्रका दौतरीहरुको जमघट। आगमनसँगै उल्लेख्य संख्यामा भेला हुने बग्रेल्ती कार्यकर्ता। प्रधानमन्त्रीलाई भित्रैदेखि उर्जा दिने वस्तु यिनै हुन निवासमा वर्षौदेखि रहनेहरू भन्छन ‘उहाँ पुराना समानहरु देखेर उत्साहित बन्नुहुन्छ र पहिले वितेका कुराहरु सम्झँदा उहाँमा ठुलो उर्जा प्राप्त हुने गर्छ‘। जसका कारण घर आएपछि उनी प्रत्येक पटक केही कडा, नौलो र धेरैपटक राजतैतिक बृत्तमा ठूलो बहसको विषय बन्ने अभिब्यक्ती दिने गर्छन्। कोइरालाको यो बानीको पुष्टि गर्छन् बाल सखा ‘मनोहरी बराल’। बाल्यकाल र राजनैतिक जीवनको लामो यात्राका कोइरालाका एकमात्र जीवीत साथी हुन् उनी। जहिले पनि राजनीति र पार्टीको जिम्मेवारी बहन गर्न इमान्दार देखिने कोईरालाको आत्मबल अनौंठो किसिमको रहेको उनी स्मरण गर्छन। ६० बर्षलामो संगतमा कहिले पनि कोईराला समस्या पर्दा नडगमगाएको स्मरण गर्छन् ‘मनोहरी’।
भाउजु नोना रहँदा सीधै आफ्नो कोठामा पुग्ने कोइरालाको पुरानो शैली फेरिएको छ। अहिले घर आउँदा कोइराला भर्याङकै पश्चिमपट्टी रहेको भाउजूको कोठा पस्छन्। त्यहाँका सामान नियाल्छन्। त्यो सँगै जोडिएको पिताजी कै पालादेखीको पूजा कोठामा पस्छन्। त्यहाँ राखिएका सान्दाजु, मातापिता, लगायत दिवंगत परिवारका श्यामश्वेत तस्बिरहरु हेर्छन्। करीब एक फिटका शिवजी र पार्वतीको कालो रंगका मूर्तिहरू हेर्छन्। गणेशलगायतका भगवानका मूर्तिका अघिल्तिर एक छिन प्रार्थना गर्छन्। अनि बरण्डा ढाकेर बग्रेल्ती भेला भएका संचारकर्मी र कार्यकर्ताको भीड छिचोल्दै आफ्नो उत्तरपट्टिको कोठामा पस्छन्।
केही बेरमा निस्केर सञ्चारकर्मीसँगै बसेर चियाको चुस्की लगाउदै बोल्न थाल्छन्। बरण्डामा बसेर कार्यकर्ता र संचारकर्मीसंग कुरा गर्ने यो शैली भने उनको मात्र होईन। बीपीकै पालादेखि यसले निरन्तरता पाउदै आएको हो। प्रधानमन्त्री निवास पस्न कसैलाई रोकतोक छैन। एक पटक संचारकर्मीसँग कुरा गरिरहँदा प्रधानमन्त्रीसँग पैसा माग्नलाई भिखारी बरण्डामै पुगेका थिए। भिखारीलाई प्रधानमन्त्रीका अघि देखेर सबै अचम्ममा परे। सुरक्षा निकायका प्रमुखले ड्यूटीमा रहेका कर्मचारीलाई बेस्कन हपारे तर प्रधानमन्त्रीले केही भनेनन्।
निवासका कामदारहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रायः एक्लै खाना खाँदैनन्। खाना खाने बेला धेरै जना भएको उनलाई मन पर्छ। प्रायः बारीको सामान्य तरकारीसँगै खाना खान रुचाउने प्रधानमन्त्रीलाई मांशाहारी भोजन मनपर्छ। थोरै भात परेवाको मासुको झोल, नरिवलको पानी, साग र घ्यू खान मन पराउछन्। एक पटक खाना खाने बेलामा थोरै मानिस देखेर भाउजु नोनालाई उनले निवासमा मानिसहरु आउदैनन्? बाटोबाट भए पनि मान्छे बोलाउ सँगै खाना खाउँ‘ भनेको प्रसङ्ग निवासमा स्मरणीय मानिन्छ। निवास एउटा प्रजातान्त्रिक इतिहासको सिंगो संग्राहलय झैँ बनको छ। यसका भित्री कोठाहरुमा पिताजी, बीपीदेखि नोना र सुशिलासमेतले प्रयोग गरेका सामाग्रीहरु सजाईएका छन। कुनै परिवर्तन गरिएका छैनन्। यति सम्मकी माताजीले पुजा कोठाको ढोकामा पुरानो सिसीमा रोपेको ‘मनिप्लान्ट‘ पनि जीवितै छ। घरको यही पुरानो वातावरण अनि पुराना साथीभाईहरु सँगको भेटघाट नै कोइरालालाई उर्जा दिने बस्तुहरू हुन्।
ओके बाजे र पाल्पा : अगनसिंह थापा
पानी मरुवा पाल्पालीहरू : कपुर ज्ञवाली